Afhayeenkii hore ee madaxweyne Shiikh Shariif oo loo magacaabey Garyaqaanka guud ee Qaranka • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Afhayeenkii hore ee madaxweyne Shiikh Shariif oo loo magacaabey Garyaqaanka guud ee Qaranka
Shir ay maanta isugu yimaadeen golaha wasiirada dawladda kumeelgaarka ah ayaa lagu soo bandhigey qofka noqonaaya garyaqaanka guud ee Dawladda.
Wasiirka Garsoorka, Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ayaa soo bandhigey isla markaana sharaxaad ka bixiyey Avv Xassan Cali Xayle in uu ku habboon yahay booskaas. Wadahadl yar kadib golaha wasiirada ayaa meel mariyey in Avv. Xassan Cali Xayle noqdo Garyaqaanka Guud ee Qaranka.
Xassan Xayle ayaa markii lagu soo doortey Shiikh Shariif dalka Jabuuti Jan 2009 noqdey Afhayeenka Madaxtooyada iyada oo bilo kadib halkaas laga bedeley, isla markaana loo magacaabey la taliyaha Madaxweyna.
Arrintan ayaa daba socota dagaal dhanka sharciga ah oo u dhexeeya laamaha dastuuriga ah ee Dawladda kumeelgaarka ah kuwaas oo uu dhegalay khilaaf aan xalkiisa weli la helin, dhawaan ayaa sidaan oo kale xilka Maxkmadda Sare loo magacaabey Caydiid Ilkaxanaf oo muddo dheer Xildhibaan soo ahaa, waxaana xilkii laga qaadey Guddoomiyihii hore ee Maxkmadda isaga oo xilkaas hayey muddo laba bilood ah oo keliya, waxaana la sheegayaa in xiriirka uu lalahaa Guddoomiyaha Baarlamaanku ee ahaa mid adag.
Xilalka loo magacaabayo laamaha sharciga ayaa la dhihi karaa waxaa loogu gogol xaarayaa Bisha Agoosto marka la gaaro haddii Baarlamaanku isku dayo in ay doorasho qabtaan in dhanka sharciga loo adeegsado isla markaana laga dhigo mid sharciga aan waafqasaneyn, kadibna Khiyaamo qaran lagu soo oogo Shirguddoonka Baarlmanaaka.